Square Enix na-ewetara anyị Final Fantasy Brave Exvius na gam akporo | Gam akporosis
Anwansi nke Square Enix laghachiri na Fantasy Final: Brave Exvius
Ihe ndị a na-abụkarị ọnụma ebido iru mpaghara ụfọdụ ebe imirikiti mba ga-eche ka egwuregwu ahụ bido n'ụwa niile. Anyị ataala ahụhụ ya n'oge ahụ na Clash Royale mgbe ọ dị maka izu ole na ole na mpaghara dị iche iche ebe ndị ọzọ niile na-atamu mbọ iji wepụta ya. Enwere nhọrọ nke APK mgbe niile, mana ọ bụghị mmadụ niile dị njikere ịwụnye ha iji nweta egwuregwu na ụbọchị ma ọ bụ izu nwere ike ịnwe na-enweghị nnukwu nsogbu site na Playlọ Ahịa Google. Enweghi egwuregwu vidio ole na ole ewepụtara n'ụzọ dị otú a, ọkachasị iji gosipụta na ihe niile na-aga nke ọma na n'ikpeazụ ọ nwere ike ịmalite ụwa niile ma wepụta zuru oke.
Otu n'ime ndị na-arahụ site na a "adụ igba egbe" bụ Final Fantasy Nwere Obi Ike Exvius, ọhụrụ si Square Enix na nke dị ka a nnukwu nzọ maka ọrụ ọzọ n'ụdị nke nnukwu aha a na-enye ihe ọchị n'ụba ruo ọtụtụ iri afọ. Yabụ mgbe ịnọchara na mpaghara dị iche iche, dịka ọ dị na Japan, ọ dị onye ọ bụla ugbu a site na ịhapụ ya na ụwa niile. Will ga-emikpu onwe gị na akụkọ na-akpali akpali nke ị ga-agbaso ọchị abụọ nke alaeze Grandshelt mgbe nwatakịrị nwanyị pụtara n'ihu ha na mberede. Ọdịdị nke nwa agbọghọ a ga-agbanwe ka ndị egwuregwu na-enyocha ụzọ ha site na ụdị dungeons dị iche iche.
1 Otu ihe dị mkpa na-esote
2 Ndị dike a ma ama na-echere gị
Otu ihe dị mkpa na-esote
Square Enix maara na ọ nwere ịnyịnya mmeri na usoro RPG nke ọgụ ihe e ji agbanwe agbanwe, ihe anyị na-agba nkịtị ka ọ bụrụ na Final Fantasy nke a tọhapụrụ kemgbe ọtụtụ afọ kemgbe ọ kpaliri ọtụtụ nde ndị egwuregwu gburugburu ụwa. Na Final Fantasy Brave Exvius anyị na-ahụ otu egwuregwu ahụ na maka ndị a na-eji egwuregwu ndị a, ị ga-enwe mmetụta n'ụlọ.
Dịka nkọwa mara mma, akụkọ ifo nke aha ga-enwe oge kpakpando ha dịka ha dị Cecil, Vivi na Terra, ya mere Fans nke usoro a ga-enwe ohere icheta akụkọ pụrụ iche n'oge gara aga, nke gbakọtara site na mgbe egwuregwu ahụ malitere, ebe ọ bụ na ụda olu ga-etinye gị n'ụzọ zuru ezu na njem niile na-echere gị site na ihe egwuregwu vidio na ụdị freemium .
Na ọgụ anyị nwere ike ịsị na isi axis ya dị, ma ewezuga ihe ntụgharị bụ, ịdị mfe nke ihuenyo mmetụ pụtara ịchekwa oge iji gaa ahọpụta onye otu ọ bụla ma gaa malite mwakpo dị iche iche. Dị ka ọ dị na Final Fantasy ndị ọzọ, ihe nkwata ahụ dịkwa mkpa, ma e wezụga ịgagharị ụlọ mkpọrọ dị iche iche nke ga-enye ohere ịnweta ọdịnaya ndị ọzọ.
Ndị dike a ma ama na-echere gị
Inwe ike ịtụkwasị obi na Cecil, Vivi na Terra n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ bụ a nnukwu ihe mkpali nke ahụ na-agbakwụnye mma na Final Fantasy ọhụrụ a. Ọ na-akwadebe anyị maka utu aha ọhụrụ, dị ka nke a nke malitere ọnwa 5 gara aga, nke ga-abata maka mkpanaka ahụ, yabụ ndị na-akwado nnukwu aha RPG nwere ike ịkwadebe maka afọ ole na ole sochirinụ, ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ọrụ nke ọhụrụ ahụ ogologo oge.
Uzo oma ozo di na ya ebe na gburugburu nke ị ga-enyocha ma chọta ụdị nkwuputa niile, igbe na ndị iro n’ebe niile. Ihe kachasị mkpa nke Final Fantasy gosipụtara nke ọma na aha ọhụrụ a nke ị nwere n'efu na Playlọ Ahịa Google na micropayments doro anya nke na-enweghị ike ịhapụ na aha Eni Enix a. Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu dị egwu maka oge okpomọkụ a, ị hụrụ ya na Final Fantasy Brave Exvius.
Egwuregwu vidio nke ha na-agwakọta a dum usoro nke àgwà na-amata ya dị ka nnukwu aha. A ụda nke ukwuu, ihe odide a haziri nke ọma, gburugburu iji kwekọọ na ọtụtụ ụdị dịgasị iche iche maka mmetụta mgbaasị anwansi, otu n'ime omume ọma nke aha a. Ebube dika ị nwere ike ikwu.
Ikpeazụ Fantaxy Nwere Obi Ike Exvius
Nwee akụkọ odide
Ya oru oru
Mee ya n'efu
Mbido mpaghara gị
Ikpeazụ echiche efu Nwere Obi Ike EXVIUS
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Anwansi nke Square Enix laghachiri na Fantasy Final: Brave Exvius
Pectgba ụgbọ ala dị egwu n'etiti ndị egwuregwu abụọ na CSR Racing 2 na-egbukepụ egbukepụ
Nexus 5 ga-achụ aja Google ma ọ gaghị enweta gam akporo 7.0 Nougat